Archer D5 router ဖြင့်သင်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ Gadget သတင်း
Juan Colilla | | ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, နေအိမ်, reviews
သင့်အိမ်ရှိအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှအကန့်အသတ်ရှိသနည်းဟုသင်စဉ်းစားဖူးပါသလား။ အိမ်များစွာတွင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုသည်အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုပြproblemsနာများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ရန်ဆွေးနွေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် တည်ငြိမ်သောဆက်သွယ်မှုမရှိတော့ပါ ထိုအကဆိုးရွားစွာနှေးကွေးလာတယ်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂိမ်းကစားသူများဖြစ်လျှင်ပိုမိုလိုအပ်သည် အနိမ့် latency အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ command များနှင့်ဂိမ်းအတွင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတ်ကောင်များ၏တုံ့ပြန်မှုများအကြားအနည်းဆုံးတုန့်ပြန်မှုကြာချိန်နှင့်အတူကစားခြင်းနှင့်တိတ်ဆိတ်စွာကစားခြင်းတို့ပြုလုပ်ချိန်တွင်အမြန်နှုန်းဖြင့်မွမ်းမံမှုများကို download လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဤရွေ့ကားများနှင့်အခြားသူများငါခံစားနေရသောအခက်အခဲများဖြစ်ကြသည် ဂိမ်းကစားသူတစ်ယောက်အနေနှင့်ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုသည်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲအလွန်အမင်းနှေးကွေးလာကြောင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ router သည်မတည်မငြိမ်နှင့်တိုတောင်းသောအကွာအဝေးအချက်ပြမှုကိုမည်ကဲ့သို့ပေးသည်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
သို့သော်ပြtheနာများမှာTelefónicaကိုအားသွင်းမည့်အစားပြoverနာတက်ခဲ့သည် ငါသည်ငါ့ router ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, ငါပျမ်းမျှထက်ပိုကောင်းတဲ့ router ကိုရှာဖွေနေပေမယ့်ဒါဟာအာကာသယာဉ်ကြောင်းကိုရှာဖွေ, ငါရှာဖွေနှင့်ရှာဖွေ, ငါအစစ်အမှန်အံ့သြစရာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဤအခါသမယတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဒေသခံကွန်ယက်တစ်ခု၏အယူအဆကိုပြောင်းလဲစေပြီးအင်တာနက်ကိုသုံးသောအခါပြproblemsနာများစွာကိုနှုတ်ပိတ်နေသော router အကြောင်းပြောပါမည်။ TP-Link ကို.
1 Archer D5၊ သင်၏ကွန်ယက်သည်စမတ်ကျသည်
Archer D5၊ သင်၏ကွန်ယက်သည်စမတ်ကျသည်
router အသစ်တပ်ဆင်လိုက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်စာချုပ်ချုပ်ထားသောနှုန်း (၁၀ မဂ္ဂါဘိုက်တစ်ခု၏အခြေခံ) ပျောက်ဆုံးသွားပုံကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည် latency ကိုမဖြတ်ဘဲကစားနေစဉ် YouTube ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေနိုင်သည်။ router တည်ငြိမ်မှုမရှိခြင်း (သို့) စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ခြင်းကြောင့်ရုတ်တရက်ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ Archer D5 ကျွန်ုပ်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုအသိဥာဏ်နှင့်ထိရောက်စွာစီမံနိုင်ခဲ့သည်
ဒါပေမယ့်ဒါကမပြီးသေးဘူး၊ ငါကဲ့သို့သောနည်းပညာအသစ်များကိုသုံးနိုင်ခဲ့တယ် 5GHz ကွန်ယက် နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များကိုအဟောင်းများနှင့်ခွဲခြားရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်ယခုအချိန်တွင်ဤကြိမ်နှုန်းတွင်ပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိသောကြောင့်ပိုမိုတည်ငြိမ်သောဆက်သွယ်မှုရရှိခြင်းနှင့်ဥပမာ AirPlay Mirroring ကိုအသုံးပြုရန် bandwidth ပိုမိုမြင့်မားခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အိုင်ပက်မှ Apple TV တွင်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ယက်ရှိအခြားအသုံးပြုသူများကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိ။
1 10/100 / 1000Mbps RJ45 WAN / LAN ဆိပ်ကမ်း
3 10/100 / 1000Mbps RJ45 LAN ဆိပ်ကမ်းများ
1 RJ11 ဆိပ်ကမ်း
2 ကို USB 2.0 ဆိပ်ကမ်းများ
Power On / Off ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ
ဝိုင်ဖိုင်ဖွင့် / ပိတ်ခလုပ် Wi-Fi
ကြိုးမဲ့စံချိန်စံညွှန်း IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab
ADSL, ADSL2 နှင့် ADSL2 +
အရွယ်အစား - ၉.၀ x ၆.၃ x ၁.၅ လက်မ (9.0 x 6.3 x 1.5mm)
3GHz ရှိအင်တင်နာ ၃ ခုနှင့် 2GHz Dual-Band တွင်အပိုဖြုတ်တပ်နိုင်သောပြင်ပအင်တင်နာ ၃ ခု
2GHz အတွက် 2.4dBi နှင့် 3GHz အတွက် 5dBi အင်တင်နာပါဝါ
Archer D5 နောက်ဘက်ဆိပ်ကမ်းများ
2GHz နှင့် 4GHz dual-band ကွန်ယက်သည် bandwidth ကိုအမြင့်ဆုံးသို့ဖြန့်ကျက်ရန်နှင့်အမြန်နှုန်းနှင့်လတ္တီတွဒ်များကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်မှုများစွာမှကွန်ယက်ပိတ်ဆို့မှုကိုရှောင်ရှားရန် 802.11ac စံအသစ်ကိုထောက်ပံ့သည်။
စုစုပေါင်းအင်တင်နာ ၆ လုံးနှင့်စွမ်းအားမြင့်အသံချဲ့စက်တို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုအားကောင်းစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ FTP ဆာဗာကိုဖန်တီးရန်သို့မဟုတ်မတူညီသောကိရိယာများကိုချိတ်ဆက်ရန်အတွက်စုံလင်သော USB ports
စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်အပြန်အလှန်လဲလှယ်နိုင်သော LAN / WAN port ။
Mac Adress ကိုစစ်ထုတ်ခြင်း။
၎င်း၏စစ်ဆင်ရေး၏အများဆုံးစိတ်ကြိုက်များအတွက်ကျယ်ပြန့် configuration ကိုအပိုင်း။
စီစဉ်ထားသော ADSL Router သို့မဟုတ် Wi-Fi Router mode ။
များစွာသော router များ (ဥပမာတယ်လီဖုန်းတစ်ခုကဲ့သို့) နှင့်မတူသည်မှာဤ router သည်နေရာအနှံ့အပြားတွင်နေရာချထားခြင်းမရှိသေးပါ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ဤစက်ပစ္စည်းများ၏လည်ပတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိထားပါကကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ရှိသည်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်။ ရရှိနိုင် configurations ၏ကျယ်ပြန့ ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်မှုကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်အောက်တွင်သင့်အားအထင်ရှားဆုံးကဏ္screensများမှဖန်သားပြင်အချို့ကိုငါထားပေးမည်။
မိဘ၏ထိန်းချုပ်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သည် အချိန်ဇယားကိုသတ်မှတ် ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောစက်ပစ္စည်းအချို့အားအင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ကိုခွင့်ပြုသည်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်လိမ့်မည်။
လျင်မြန်စွာ setup ကို
မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်မှုသည်သင်၏ router အားသင်၏အင်တာနက်ပံ့ပိုးသူနှင့် configure လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည် ၅ မိနစ်အတွင်း (ဟက်တာနှင့်ဖုန်းကောင်လေးကသူ့ကိုအလုပ်လုပ်ရန်ပြင်ဆင်ရန်အလုပ်နှင့်ဗဟုသုတများစွာလိုအပ်လိမ့်မည်ဟုပြောခဲ့သည်။ )
ဤအရပ်မှသင် router ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုယေဘူယျအားဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားဖြစ်သော router software ၏ version ဖြစ်သည်။ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ, etc ...
ADSL Router နှင့် Wi-Fi Router မုဒ်
ဤဖန်သားပြင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ router ကို modem တစ်ခုအဖြစ်လုပ်ဆောင်စေလိုလျှင်၎င်းကိုတပ်ဆင်ထားပြီးသား modem မှ Wi-Fi ကိုသာထုတ်လွှင့်ရန်သာရည်ရွယ်သည်ဆိုပါက configure လုပ်နိုင်သည်။
ဤအပိုင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် bandwidth ကိုကန့်သတ်ပါ ချိတ်ဆက်ထားသော device တစ်ခုစီအတွက်သတ်မှတ်ထားသောဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ online download ပြုလုပ်နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏ downloads များကို ဦး စားပေးမည်သို့မဟုတ်အခြားအသင်းများ၏အမြန်နှုန်းကိုကန့်သတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ connection ကိုဖြန့်ဝေပုံကိုကိုယ်တိုင်စီမံနိုင်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Dual band အင်တာနာ ၆ ခု
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်မှုကိုအသုံးပြုမည့်အသုံးပြုမှုနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကိုချိန်ညှိရန်ကြိမ်နှုန်း ၂'၄ နှင့် 2GHz
ပရင်တာများသို့မဟုတ်ကင်မရာများစသည့်သိုလှောင်ရေးကိရိယာများကို USB ချိတ်ဆက်ရန် ၂
ထုတ်ကုန်များစွာမှအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ကွန်ယက်ပိတ်ဆို့မှုကိုရှောင်ရှားရန် Advanced processor နှင့် 802.11ac standard
iOS နှင့် Android အတွက်ထိန်းချုပ် app
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်သောအခါပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုအတွက်လဲလှယ်နိုင်သော LAN / WAN port
လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ခြင်းသည် router အသစ်အား ၅ မိနစ်အတွင်းဤကိရိယာများနှင့် ပတ်သတ်၍ စိတ်ကူးမရှိဘဲ configure ပြုလုပ်နိုင်သည်
ညွှန်ပြချက် LEDs ၏မြောက်မြားစွာ
ကျနော်တို့က Amazon အပေါ်လျှော့စျေးနှင့်အတူကရှာတွေ့နိုင်ပါသည်
နောက်ဆုံးပေါ် TP-Link Beamforming နည်းပညာမရှိပါ
2.0 အစား USB 3.0 ports
ကျွန်တော်တို့မှာဗဟုသုတအလုံအလောက်မရှိဘူးဆိုရင်ရှုပ်ထွေးတဲ့ interface တစ်ခုရှိတယ်
TP-Link ကို Archer D5
သင့်မှာကုမ္ပဏီကောင်းတစ်ခုနှင့်စာချုပ်ချုပ်ထားသောနှုန်းထားရှိပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ရောက်ရှိနေသည့် router ကိုအသုံးပြုနေပါကသင်၏ပံ့ပိုးသူကို (သို့) သင်၏အဖွဲ့အားဆက်သွယ်မှုပြproblemsနာများအတွက်အပြစ်တင်ခြင်းမပြုမီသင်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံနိုင်ပါ။ အသစ်တစ်ခုအတွက် router ကိုပြောင်းလဲကြိုးစားပါဤကိစ္စတွင် Archer D5 သည်ငွေကြေးတန်ဖိုးအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် TP-Link ကို ၎င်းတွင်လိုအပ်ချက်အားလုံးအတွက်ရရှိနိုင်သည့် router များစာရင်းရှိသည်။ အခြေခံမှအမြင့်ဆုံးအထိမြင်နိုင်သည် ဒီ link ကို၌သင်တို့၏ catalog.
Archer D5 ကဲ့သို့သော router အသစ်တစ်ခုနဲ့သင်ကွန်ယက်ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအသုံးပြုချင်ရင်သင့်ကွန်ပျူတာ၏ Wi-Fi ကိုပိတ်ထားစရာမလိုပါ။ မည်သူသည်မည်သူလိုချင်သည်သို့မဟုတ်မည်သူကိုအသုံးပြုသင့်သည်ဆိုသည့်အကြောင်းကိုငြင်းခုံစရာမလိုပါ။ အိမ်တွင်းကွန်ရက်သို့မဟုတ်မည်သူကိုမသုံးဘဲရပ်တန့်သင့်သနည်း၊ အခြားသူများအပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိဘဲ၊ သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုလူတိုင်းကမမြင်နိုင်သောနည်းဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည် Archer D5 ကိုထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » TP-Link Archer D5 modem router ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်သည်ဤထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးကိုသံသယမဝင်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အထောက်အပံ့ပြissueနာနှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝမသိပါ။ ကျွန်ုပ်သည် swicht နှင့်ပြhaveနာအတွက်ဖုန်းသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပြန်ပို့ရန် SAT မှ becky ကိုစောင့်နေဆဲဖြစ်သည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံအပေါ် မူတည်၍ သူတို့သည် ၂၄ နာရီအတွင်းကျွန်ုပ်အားအမြဲတမ်းဖြေဆိုကြပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အမြဲတမ်းအတူတူမဟုတ်ကြောင်းနားလည်ပါသည်၊ SAT နှင့်သင်၏မကောင်းသောအတွေ့အကြုံအတွက်တောင်းပန်ပါသည်။
Android တွင်သိုလှောင်မှုနေရာလွတ်ပေးရန်နည်းလမ်း (၇) ခု